n'ime Land | Apg29
Ebe bụ heaven mba, anyị na mmụọ anyị nwere ike glimpsed nọ n'ebe dị anya.
Ma Jizọs bụ pilot na osisi, na n'agbanyeghị anwale oké ebili mmiri mgbe craft eluigwe ọdụ ụgbọ mmiri.
Kwere ekwe mgbe tụnyere ndị ọkwọ ụgbọ mmiri na-eme njem gafee oké osimiri nke ndụ, na ụzọ eluigwe ọdụ ụgbọ mmiri.
Na ụgbọ mmiri, e nwere n'oge gara aga, a ele anya, a-akwọ ụgbọ mmiri na-elepụ anya n'elu oké osimiri. Ọ nọ ọdụ a nkata n'elu nke poolu, ruo eruo na a ụzọ maka anya abuo na nke o nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na ụgbọ mmiri ahụ nso ala. The alụlụ na foogu nwere ike mgbe-enwe ike-ahụ ndepụta nke mba ha na-aga.
Anyị bụ ndị natara Jizọs na-abịa n'elu oké osimiri nke ndụ ebe oké ifufe na-ọnụma na oké osimiri nile na ike ike. Ebe bụ heaven mba, anyị na mmụọ anyị nwere ike glimpsed nọ n'ebe dị anya. Ma Jizọs bụ pilot na osisi, na n'agbanyeghị anwale oké ebili mmiri mgbe craft eluigwe ọdụ ụgbọ mmiri.
The Bible na-agwa ndị mmadụ na-atụ anya ka a mma obodo karịa n'ụwa. Na Ndị Hibru. 11: 13-14, 16, anyị na-agụ banyere ya: Amaokwu 13:
"Na a niile nwụrụ n'okwukwe enweghị anata ihe e kwere ná nkwa. Ha dị nnọọ hụrụ ya nọ n'ebe dị anya, na kweere na ya ma kelee ya we kwuputa na ha bụ ndị bịara abịa na njem ala nsọ na ụwa. "
Ndị a bụ ndị njem ala nsọ na ndị hụrụ n'ihu na elu - nọ n'ebe dị anya. Ha hụrụ eluigwe n'ala nọ n'ebe dị anya, na ekwupụtaara n'ụwa obodo bụ nna ha. Ha ọdịmma bụ eluigwe, nke loomed nọ n'ebe dị anya. Ma n'ihi na ha nwere ike ịnwụ, ha nwere ike ghara inwe ha agụụ ihe mgbaru ọsọ. Amaokwu 14:
"N'ihi na ndị na-ekwu ihe a na-egosi na ha na-achọ a n'ala nna."
Nke ahụ pụtara na ha na-achọ a dị iche iche mba, a mma obodo karịa onye na ha si bịa. Ọ nwere ike na-apụtaghị na obodo ọ bụla ọzọ karịa a eluigwe mba, ha na-achọ. Site n'okwu ọnụ na ndụ ya ọrụ ama gosiri na ha bụ ndị bịara abịa n'ụwa a. Amaokwu 16:
"Ma ugbu a, ha na-achọ a mma obodo, a eluigwe ahụ. Ya mere, Chineke adịghị eme ihere na-akpọ Chineke ha, n'ihi na o doziri ihe nye ha a n'obodo a. "
The elu-igwe, a kwadebere maka nile nke Chineke nsọ ha tupu ha na-okokụre na ha njem na ụwa. The Chineke ha họọrọ n'anya ma na-ejere bụ Chineke ha.
Abraham na-eche a mma obodo:
"N'ihi na ọ na-echere obodo nke nwere ntọala, onye wuru ma mee ya bụ Chineke" (Heb. 11:10).
Na ọzọ translation agụ, sị:
"N'ihi na ọ nọ na-eche anya na obi ike."
Abraham ejeghariwo a eluigwe na ndu ebighi-ihe mgbaru ọsọ. Ọ dịrị ndụ ná ndụ ya niile na-adịru nwa oge niile. Ọ dị njikere ime otú ahụ, dị ka ọ na-echere obodo nke nwere ntọala. Ọchịchọ bụ ihe na-adịgide adịgide, n'adịghị ka akwagharị o biri ndụ, ebe O biri n'ụlọikwuu ya. O na-atụ anya ihe ọ bụla n'ụwa obodo, ma onye na Chineke wuru. Ntọala ụwa na-ejighị n'aka na-ejighị n'aka, kama na obodo na Abraham nọ na-echere e wuru na ntọala ndị siri ike, nke nwere ike mgbe maa jijiji.
Obodo, anyị na-aga n'ụzọ, anyị nwere anyị amaala n'eluigwe. Anyị na-ele na agụụ na atụmanya mgbe anyị Eluigwe nnochite anya, Jizọs ga-abịa ma bulie anyị na e nwere.